Lo loliwe nge Uhambo eYurophu iqala e Vienna, ikomkhulu Austria. kweentsuku ezimbini obuzukileyo adventure Kulindelwe iinkcukacha. streetscapes yobuciko nezigodlo zinkulu zimisele umoya omawulawule ukubonisa wobugcisa, wezakhiwo, inkcubeko, kunye nobugcisa bomculo. Oku esecaleni wayenomona coffee-indlu inkcubeko yalo nemifanekiso noyilo oludlamkileyo.
uloliwe lakho lonke elaseYurophu uyaqhubeka, kokuchitha imini kwisixeko Salzburg Austria kaThixo. It is on kumda Germany kwaye zitsala umdla eMpuma Alps. Ibango likaSalzburg lodumo lokuba yidolophu enencwadi yamabali neyayikade ilikhaya lomqambi omkhulu wehlabathi, Mozart.
Iintaba baphila Salzburg. It elalifudula usetyenziswa indawo bhanyabhanya ukuba kakhulu akukhuthazwa, “Isandi soMculo” kwaye kukho umbono onokubambeka wendalo yobugcisa. Kwakhona exudes a nzolo ethulile.
IMunich kunye nelifa layo laseBavaria kulapho ibhiya kunye nesiko lokuphisa lenze indawo ebalulekileyo kwinkcubeko yabo, eminyaka phantse ezisixhenxe. I Oktoberfest kwi phezulu kuluhlu eMunich. Oku ibhiyozelwe izigidi zabantu ukuba tyelelo kulo lonke jikelele, bathathe inxaxheba kwimibhiyozo.
IParis kufuneka intshayelelo encinane ngezakhiwo lenkundla kuquka i-Eiffel Tower, i Arc de Triomphe, kwaye i I-Notre Dame Cathedral. Igama izindawo nelithi isimbo ngenxa yesizathu esihle. lindela cuisine-class umhlaba, shopping, neegalari ezo umthombo uphelayo yeNkosi eyayicace sindiso. Uloliwe uhambo kakhulu eYurophu uya kusoloko kubandakanya le sixeko sidume.
Amsterdam kulapho iza misele imbali, ngayo ivamile, kunye uhambahamba olondolozo lwembali iivenkile evumile-ezaliswe. ukusela, yokutyela, Uyilo lwezigcawu luyonwabisa kwaye luyonwabisa. Amsterdam sisixeko ngumothuko kwaye likhaya loMmandla Van Gogh imyuziyam kwakunye nezinye ubutyebi ukubonisa.
Berlin kuya kufuneka iintsuku ezintathu ngokuntywiliselwa. IBerlin yaziwa ngokuba yiyo “isixeko esingaze silale”. Wasebenzise nokudlamka yayo! Ubusuku for kwimihlali imihla ukuze izinto zenkcubeko.
Uhambo Uloliwe eYurophu iphela e Prague, emva isivunguvungu wonder. Prague isixeko iCathedral kwaye isoloko kuthelekiswa ubuhle Paris. Kuba Kwakhona kuchazwa ngokuthi ekhaya etywaleni Europe osenyongweni. Nandipha njengomboniso a 14th bridge stone kwekhulu, kwinqaba lenduli, kunye nomlambo owonqenayo. Yeyona ndlela ogqibeleleyo ukuphelisa uhambo ngololiwe eYurophu.
Uloliwe uhambo kakhulu eYurophu uya kuqinisekisa ukuba ukhululekile waphefumla. Kwamkele ubuhle endleleni, ukhuseleko lokuhamba ngololiwe, kunye nokucinezela kwiindawo ezininzi kangangoko kunokwenzeka. Akukho ndlela engcono yokuhamba. Book kunye Gcina A Isitimela namhlanje!